QISADII FAADUMO FARANSA IYO QAABKII AY KU ISLAAMTAY. – Sumcadda Islaamka
QISADII FAADUMO FARANSA IYO QAABKII AY KU ISLAAMTAY.
Waxay ku kortay nolol ka bad-badin iyo koolkoolin kobtii ugu saraysay ka gaartay.
Waxay is aragtay iyada oo wax kasta oo ay ubaahato si deg deg ah ku hesha hadiiba ay yihiin arimo dhaqaale ku xiran.
Waxay gali jirtay aqal ka tilmaaman guryaha degsiimadeeda oo uu ku dhan yahay agab nolol lagu maamulo intii ugu mudnayd
Aqoon iyo tacliin waxay ka gaartay idlaynta iskuulka sare iyo ebyida jaamacad ay ku baratay culuumta dhaqtarnimada kumase ayan shaqayn oo malaha waxaaba lays oran karay waa aqoon ay ubaratay in ay ugu adeegto nafteeda oo kaliya .
Waxay kali ku ahayd hooyo iyo aabe aan eeganaynin ubad aan iyada ahayn in kasta oo uu aabaheed ku dhintay shil gaari maalintii ay iyadu 20 jirsatay oo abbaartii iminka laga joogo 22 sano.
Waxay is aragtay iyada oo dhex mushaaxaysa hanti farihii ka badatay oo ay inteeda badan aabaheed ka dhaxashay in kasta oo ay soo kordhisay shirkado wax soor oo ay ka heshay ribix wax badan ku daray rasamaalkii dhaxal ahaanta ku soo galay gacanteeda.
Si kasta oo ay uhanatay macaanka nolosha dunida hadana micno badan uma samaynaynin Ex jeneffer maalintii ay hana qaaday ilaa muddo dheer oo cimrigeeda ka mid ah waxay dareemi jirtay nolol ciriiryoon iyo walwal aysan garan karin waxa uu ka micno yahay.
Mar kasta oo uu gu’ ukordhoba waxaa u kordhi jiray murug iyo mashaqo ayan meelna ku sheegi karin waxa sababay oo maankeeda galaafatay.
Waxay iska weyday wax farxad ah iyo qanaaco ay nolosha ku qabto.
Hamigeedii oo idil waxaa hareeyay walwalka iyo walaaca ku habsaday ee ayan garan karin waxa usababay.
Lama tirin karo inta dhakhaartiir takhasus uleh cudurada maanka ee ay utagtay.
Waxay u ahayd xad kabax xisaabta maaliyadeed ee ay ku maaraynaysay xalinta mashaqadan ay maqaadiirta la soo doonatay.
Aad bay uyaraayeen inta meel muunad leh ee maanka lagu nasin karo ee aysan dalxiis ahaan u tagin.
Aad bay uyareyd inta arimo farxad laga heli karo ee loo tilmaamay ee aysan u dag dagin.
Waxay nolosheedii ku soo xoontay rajo beel iyo in ay nacdo nafteeda oo maxay samaysaa mar haddii farxad lagu naaloodo ay ku heli weyday hantideeda faraha badan?!!!
Waxa u haray oo kaliya ayaa mudooyinkan dambe ugu muuqanayay arimo ismiidaamin ah oo ay nafsadeeda kaga takhalusayso.
Hooyadeed oo hurdo iyo hoyaatin ka tagtay sidii ay ula harjadaysay inanteedaan mashaqaysan ayaa maalin uun maankeeda alle ku soo riday bal in ay inanteeda africa ukaxayso si ay usoo aragto dadka ku nool rafaadka ee misana ku raaliga ah.
Iyadoon ka laba labayn ayay waddan africada galbeed ku yaal ka tuurtay.
Maalin maalmaha oga tilmaaman ayay ka soo dageen gagida dayuuradaha ee dalka ay caasimadda utahay magaalada BANJUL.
Waxay ku dageen hoteelkii hoteelada ugu mudnaa ee magaaladaas laga heli karay.
Haday maalmo joogeen asii maalinba meel dalxiis booqasho loogu kaxeeyo ayaa waxaa mar qura maankeeda soo jiitay nolosha ciriiryoon ee farxada lagu lamaaniyay ee ay haystaan inta badan dadkan ay maalin kasta kula kulanto min hoteelka ilaa goob kasta oo ay dani u aaddo iyo dariiqyada ay sii marayso
Maalintii ay timi ayay mashquul ku noqotay gabdho hoteelka nadaafadda uqaabilsan oo kala boobaya hambo iyo haraa raashin habeen bari ah oo ay ka heleen qolkeeda hortiisa’misana waxay siisan weyday sida ay uqoslayaan oo ay isula kaftamayaan hablahan ay baahidu heerkaa gaarsiisay.
Waxaa uxigay maalin ay sii mareen tuulo faqriga iyo rafaadka ka muuqda uu yahay mid uusan maankeedu waligii sawiran!!!!
Dad silic iyo saxariir ka dhargay oo ku nool cooshado baco iyo baakado ka samaysan,rag iyo dumar rafaad ka muuqdo oo huga ay intooda badan xiran yihiin istiraasho la moodo,caruur caloolo buur-buuran oo caga caddaan ah.
In kasta oo uu maankeedu damqayay muuqaalka horteeda ka muuqda misana waxaa iyada micno usamaynayay farxadda iyo qosolka iyo maadda ay iyadu malaayiinta ku weyday ee ay dadkaasi haystaan.
Waxay jeclaysatay haddii iyada maqaamkaas nolosha laga gayn lahaa malaayinta ay haysatana dadkan ka hor muuqda loo meerin lahaay.
Waxba yaanan hadal kugu daalinine Ex jineffer waxay jeclaysatay in ay usoo guurto meeshan laga haysto farxada aan shilinka ku fadhin oo markiiba hooyadeed ayay arintii ka raariday.
Maalin kama soo wareegin markii loo dhisay aqal la mid ah midka ugu liita kuwa tuuladaas ka yagleelan.
Iyada iyo hooyadeed waxay markiiba la kulmeen mudanihii tuuladaas xukumayay isagana inta is xilqaamay ayuu booliis dusha ka ilaaliya uratibay martidan cad cad ee soo miciin biday tuuladaan ay musiibada nolosho meel kasta ka haraysay.
Waxay arkaysay eeyaha ay subax kasta ugaaratada tuuladan ku badan ay kaynta kula jarmaadaan,waxay kaloo arkaysay haween danleey ah oo subax kasta xaabo ku raran si ay anfaca maalin la noolka ugu soo saaraan caruurta isuma qadada ah ee ay sida mijin galis mijin ka baxa ahi u dhaleen,
wax ay aragto waxa ugu ladnaa beeralayda tuulada ee qudaarta iyo anfaca dayacan ku soo daadiya suuq yaraha iyo sidoo kale caruur rifrifan oo gala qowlado cariish ah oo loogu sheegay school wax lagu barto.
Dadku waa muslimiin oo inta badan waxay maqlaysaa aadaan aan codbaahiye heli karin ee uu nin meel sare fuushan maalintii shan jeer ku dhawaaqo ereyo aysan micnahooda fahmi karin in kasta oo ay degsiimadan ka helaysay dad la yaqaan luuqadeeda faransiiska ah.
Ex jineffer waxay dareentay nafsad soo kabanaysa oo muuqaalada ka hor muuqda ayaa halmaansiiyay xanuunkii badnaa ee maankeeda mudada dheer dilooday.
Hooyadeed maqsuud bay ka ahayd arintaas.
Intuba inta ka dhaqso badane wax badan kama qaadan inay iyada iyo hooyadeed si kasta isugu ekeysiiyaan dadkan ay la darseen xitaa xagga aradtirka iyo anfaca soorta iyo kasaafada ubadan.
Waxay kaloo doonteen wadaad usharaxa diinta islaamka ee laga haysto tuuladan taasoo ay markiiba qaateen ex jinnefer iyo hooyadeed oo loo kala bixiyay fatma iyo saara sida ay ukala horeeyaan.
Fatma fransa oo ah magaca hadda looga yaqaan tuuladaas waxay si cad u sheegtay in ay raxmadda alle ku soo dagtay maalintii ay timid tuuladaan,waxayna ku celcelisaa in qalbigii hurayay biyo qaboow looga shubay maalintii ay qirtay ashahaadada astaanta u ah diinta islaamka.
Hooyadeed ayaa iyana ogolaatay inuu qumaati qalbigeeda utaabtay macaanka iimaanka in kasta oo ay iyadu inanta ku dhaantay inay markii horeba haysatay diinta kiristaan oo ah mid iimaan ahaan aan sidaa oga fogayn islaamka.
Fatma fransa iyo hooyadeed saara waxay daganaansho iyo farxad ka heleen diintii laga haystay degaankaas dayacan ee loogu dowgalay darxumada dadkiisa ka muuqata.
Isla cagidiiba labadan dumar ee is dhashay waxay cindiga galiyeen caawinta dadkan cayrta ah ee iyaga ku caawiyay helidda caafimad ay muddo dheer u caalwaayeen.
Hanti wixii ay haysteen iyo wax soo saar wixii ay lahaayeen ayay markiiba u adeegsadeen in ay dadkan silicsan gurmad ufidiyaan.
Cunto siin iyo caruur nafaqayn maalmo socotay ka bacdi ayay sidoo kale suura galiyeen dhismaha cusbitaal casri ah oo cudurada looga daweeyo kuwan uu cagaagga dilooday ee ay la soo darseen.
Qaban qaabadii uxigtayna waxay qoolka ka jareen iskuul aad u weyn oo si kasta ugu eg kuwa cilmiga laga barto ee ku yiilay carigii ay ka soo hayaameen.
Hadday inbadan ku foognaayeen mashaariic is xig xigay oo ay hadba ka hirgalinayeen tuuladan hadda u noqotay hoyga ay kula soo carareen nafsadihii cadaabnaa ayaa ugu dambeyn waxay howshii ku soo ururiyeen xafiis weyn oo ay halkaasi ka dhiseen kaasi oo si habsami ah ukala haga howlaha samafal ee ay in badan u aayeen dadkii degsiimada ku rafaadsanaa.
Duqayda iyo madaxda dowladda ee degaankaas ka arimisa ayaa soo abaabulay kulamo hambalyo iyo mahadcelin ah oo loo diyaariyay dumarkan qaxootiga ah ee u muujiyay dadka degaankan dadaalka lagu diirsaday iyo waxtarka aan la dafiri karin.
Fatma fransa iyo hooyadeed wali waxay ku nool yihiin cariishkii ay tuulada ka dageen waxayna iska diideen in ay noloshooda dambe dib ugu laabtaan fransa iyo yurub marka laga soo tago inay ka doontaan hanti ay uhuraan samofalka dadka.
Xiliyadan waxaa caadi ah in aroorta hore lagu arki karo faadumo iyo saara ilinka hore ee daaradooda iyaga oo loo meerinayo daraaso diini ah oo uu ugu horeeyo quraanka kariimka ah.
Halka ay saacado ka dibna ukala huleelaan xafiiska iyo cusbitaalka halkaasoo ay faadmo cusbitaalka ka tahay dhaqtaradda koowaad halka ay hooyadeedna xafiiska ka hayso isku dubaridka howlaha samafal ee ay isku balansadeen inta noloshooda ka hartay.
NB:Waa qiso cajiib badneyd oo uu iiga sheekeeyay mid saaxiibaday ka mid ah oo waayo ku noolaa wadankaas afrikada galbeed dhaca ee qisadanu ka dhacday.
Aniga soo gudbinta oo kaliya iyo qaabka farsamo ee ay sheekada isugu xiran tahay ayaan ku leeyahay.
AKHRI OO KU DHAQAN.
QISADII MARYAMA BINTU CIMRAAN QAYBTII 1AAD.